Dad rayid ah oo lagu dilay magaalada Gaarisa. – Radio Daljir
Febraayo 4, 2012 12:00 b 0
Garisa,Feb 4 -Kooxo hubaysan oo wajiyda soo duubtay ayaa habeenkii xalay fal dil ah ugu gaystay degmada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Kenya dad shacab ah oo ku sugnaa goob lagu qaxweeyo.
Wararka aanu helayno ayaa sheegaya weerarkaasi inay ku geeriyooday laba qof ayna jiraan dad si xun ugu dhaawacmay weerarka oo xiligaan lagu daawaynayo xarumaha caafimaadka ee magaalada Gaarisa.
Booliska magaalada Gaarisa ayaa wada howlgal balaaran oo ay ku baadi goobayaan dadkii falkan ka dambeeyay,mana jirto wax war ah oo ay soo saareen oo ku’aadan in lasoo qabtay dadkii weerarkan gaytsay iyo in kale.
Ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Mashruuc laami loogu samaynayo magaalada Boosaaso oo maanata qallinka lagu duugay.